Silk: Gbanwee data na mpempe akwụkwọ ka ọ bụrụ ihe e mepụtara | Martech Zone
You nwetụlarị mpempe akwụkwọ nwere mpempe data dị egwu ma ịchọrọ iji anya nke uche hụ ya - mana ịnwale na ịhazi sistemụ arụnyere na Excel siri ike ma na-eri oge? Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye data, jikwaa ya, bulite ya na ọbụnadị ịkekọrịta ngosipụta ndị ahụ?
You nwere ike silk. Silk bụ usoro mbipụta data.
Silks nwere data na otu isiokwu. Onye ọ bụla nwere ike ịchọgharị Silk iji chọpụta data ma mepụta eserese mmekọrịta mara mma, maapụ yana ibe weebụ. Ruo ugbu a, e mepụtara ọtụtụ nde akwụkwọ siliki.
Lee Ihe Nlereanya
gaa Leta Top 15 Nnukwu Netwọk mmekọrịta Silk iji lelee, kesaa ma ọ bụ ọbụlagodi ngosipụta emere site na nchịkọta data a. Nke a bụ ebe dị ndụ nke eserese mmanya nke ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ:
Data sitere nnukwu-social-networks.silk.co
Mee ka ederede na ederede mmekọrịta - Kama izipu PDFs, akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ njikọ sitere na Google Docs, jiri Silk mee saịtị mmekọrịta zuru oke nke na - eme ndị ọrụ ma gbaa ha ume iji data gị gwurie egwu.
Tinye data mmekọrịta n'ebe ọ bụla - Were ihe nlere anya gị na silk ma jiri ha na weebụ niile. Tinye ha na Tumblr, WordPress, na ọtụtụ nyiwe mbipụta ndị ọzọ.
Tinye mkpado iji mee ka ọrụ gị nwee ike ịhazi ya site na ọkara, ụdị, ma ọ bụ ụdị ọ bụla ị họọrọ. Site na itinye data ebe, ị nwekwara ike iru maapụ.
Itinye silk iji, M exported anyị isiokwu rankings si Semrush na ngwa ngwa wulite a ngosipụta nke na-ekwe ka m idozi ịtụ na-ele Keywords ebe m nwere ụfọdụ elu rankings na e nwere a ton nke olu olu… ihu ọma na-eme ka m mara ebe ụfọdụ njikarịcha na nkwalite nwere ike mbanye a otutu ihe okporo ụzọ. Enwere m ike ime nke a site na ịhazi na nzacha data ahụ… mana ihe ngosi anya mere ka ọ pụta ìhè!
Tags: mbipụta datanchịkọta akụkọ dataỊhụ ihu igweikpo okwu ngosi datasilksilk
Ihe kpatara na otu esi edozi akaụntụ Gravatar
Ndị ọkachamara na Social Media enweghị ike ijikwa eziokwu